Mogadishu Journal » Faahfaahin ka soo baxeysa qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba oo ka tirsan gobolka Baay, kuwaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sida wararku sheegayaan qaraxa hore waxa uu ka dhacay xalay maqaaxi lagu caweeya oo ku taala magaalada Baydhabo, waxaana halkaasi ka dhashay dhimashada hal qof iyo dhaawac Saddex ruux oo kale kuwaasoo dhamaantood ah dad Shacab ah.
Ciidamo ka tirsan Booliska magaalada ayaa tagay halka qaraxa uu ka dhacay oo ah xaafada Wadajir, iyagoo halkaasi ka sameeyay howlgal, walow aan la soo sheegin cid qaraxa loo soo qabtay.
Qaraxa 2-aad waxa uu maanta ka dhacay goob Ciidamada ay gawaarida lacago uga qaadaan oo ku taalaa magaalada Buurhakaba, iyadoo qaraxa kadib Ciidamada ay rasaas dhowr jiho u fureen.
Qof kamid ah dadka ku sugan magaalada ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay inuu jiro khasaare kala duwan oo gaaray Ciidamada, walow aan si rasmi ah loo ogaan inta uu gaarsiisan yahay.
Sidoo kale dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa isla Buurhakaba ku dishay nin lagu magacaabi jiray Mukhtaar Subagle, kaasoo kamid ahaa ergadii Xildhibaanada ku soo dooratay magaalada Baydhabo sanadkii 2016.
Kalfadhigga Baarlamaanka oo maanta dib u furmaya